भगवानका पालादेखिको तथ्य: महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ ? जान्नुहोस् – List Khabar
Home / रोचक / भगवानका पालादेखिको तथ्य: महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ ? जान्नुहोस्
admin January 24, 2022 रोचक Leaveacomment 50 Views
भगवानका पालादेखिको तथ्य: महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ ? महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ भन्ने बहस निकै पुरानो हो । तपाईलाई यो थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि यो रहस्यको चाबी महाभारत र ग्रीक दुवै देवताहरूमा लुकेको छ।
आउनुहोस् हामी तपाईलाई यस्ता दुई पौराणिक कथाको बारेमा बताउँछौं जसमा यो रहस्यमय रहस्य लुकेको छ र जसलाई पढेपछि तपाईले पनि दाँतमुनि औँला थिच्नुहुनेछ ।
महाभारतमा काम–रसको वर्णन छ।
एकपटक युधिष्ठिर आफ्ना पितामह भीष्मकहाँ गएर भने, हे तत् श्री । मेरो एउटा दुविधाको समाधान गर्नुहुन्छ ? के तपाई मलाई सत्य बताउनुहुन्छ, यौनसम्पर्क गर्दा बढी आनन्द प्राप्त गर्ने पुरुष वा महिला को हो ? भीष्मले भने, यस सम्बन्धमा म तिमीलाई भंगस्वाना र सकराको कथा सुनाउँछु भने ।
पुरुष हुन अस्वीकार
यो कथालाई अगाडि बढाउँदै भीष्मले युधिष्ठिरलाई सुनाए । यो सबै सुनेर इन्द्र प्रसन्न भए र राजाका सबै छोराहरूलाई पुनर्जीवित गरे। त्यसपछि इन्द्रले राजालाई फेरि पुरुष स्वरूप दिने कुरा गरे । इन्द्रले भने, हे भंगस्वाना, तिमीसँग खुसी भएर म तिमीलाई पुरुष बनाउन चाहन्छुू तर राजाले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे।
नारीले थप तृप्ति र सुख प्राप्त गर्छिन्
नारीको रूपमा भंगस्वानाले भनिन्, हे भगवानका राजा इन्द्र, म नारी भएर खुशी छु र नारी नै रहन चाहन्छु ।” यो सुनेर इन्द्र जिज्ञासु भए र सोधे किन यस्तो राजा तिमी पुरुष बनेर आफ्नो राज्य पाउन चाहँदैनौ ? भंगस्वानाले भनिन्, ‘किनभने संयोगको समयमा पुरुषको तुलनामा महिलाले धेरै गुणा बढी तृप्ति र सुख पाउँछ, त्यसैले म महिला नै रहन चाहन्छु । इन्द्रले ‘तथास्तु’ भने र त्यहाँबाट निस्किए ।
महिलाहरू पुरुषको तुलनामा धेरै गुणा बढी संवेदनशील हुन्छन्
भीष्मले भने, हे युधिष्ठिर, यो स्पष्ट छ कि सम्बन्धमा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी आनन्द पाउँछ। र हामी सबैलाई थाहा छ कि महिलाहरू पुरुषहरू भन्दा धेरै गुणा बढी संवेदनशील हुन्छन्। महाभारतको यो उद्धरणको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ ? प्रतिक्रियामा लेख्नुहोस् । ग्रीक माईथोलोजीको कथा अर्को पेजमा प्रस्तुत गर्नेछौ ।
पुरुष बन्न इन्कार
हे नारीहरूका राजा, आफ्नो एउटा सन्तानलाई जिउँदै ल्याउन चाहाने हो भने म नारी हुँदा जन्मिएका छोराहरु बचाउनुहोस् । भंगस्वानाले इन्द्रलाई भने, यदि यस्तो हो भने, मैले नारी भएर जन्मेका मेरा छोराहरू जिउँदै हेर्न चाहान्छु । आश्चर्यचकित भएर इन्द्रले यसको कारण सोधे र राजाले जवाफ दिए, हे इन्द्र । पुरुषको तुलनामा नारीको माया धेरै हुन्छ, त्यसैले म आफ्नो गर्भबाट जन्मिएका सन्तानका लागि जीवनदान मागेको छु । म पुरुष भएर जन्माएका सन्तान भन्दा महिला भएर जन्माएका सन्तानबिना बाँच्न सक्दिन ।
भंगस्वाना र सकराको कथा
धेरै पहिले त्यहाँ भंगस्वाना नामक राजा बस्थे। उनी ठीक र धेरै सफल थिए तर कुनै छोरा थिएनन् । छ वर्षको उमेरमा त्यो राजाले ‘अग्निष्टुता’ नामको अनुष्ठान गरेका थिए । किनकी त्यो हवनमा अग्नि भगवानको मात्र सम्मान थियो, त्यसैले देवराज इन्द्र निकै क्रोधित भए ।
इन्द्रले आफ्नो क्रोध निकाल्ने मौका खोज्न थाले ताकि राजा भंगस्वानाले केही गल्ती गरे र उनलाई सजाय दिन सकून्। तर भंगस्वाना यति राम्रा राजा थिए कि इन्द्रले कुनै मौका पाएनन्, जसका कारण इन्द्रको क्रोध बढ्दै गयो । एक दिन राजा शिकारमा निस्किए, इन्द्रले आफ्नो अपमानको बदला लिने यो सही समय हो भनी सोचे र इन्द्रले राजालाई सम्मोहित गरे।
राजा भंगस्वाना जंगलमा यता उता घुम्न थाले । भगवान इन्द्रको सम्मोहित अवस्थामा, उसले सबै ध्यान गुमाए, न उसले दिशा बुझ्न सके न त आफ्ना सैनिकहरूलाई देख्न सके। भोक र तिर्खाले उनलाई झनै विचलित बनाएको थियो । अचानक उसले एउटा सानो नदी देख्यो जुन कुनै जादू जस्तै सुन्दर देखिन्थ्यो। राजा त्यो नदी तर्फ लागे र पहिले घोडालाई पानी दिए, त्यसपछि आफैले पिए ।
राजा भंगस्वानाको नारी रूप
राजा नदीमा छिर्नेबित्तिकै पानी पिए, उसले त्यो परिवर्तन भएको देखे । बिस्तारै उनी महिलामा परिणत भए । लाजले दबिएका राजा चर्को स्वरले कराउन थाले । उसलाई किन यस्तो भएको हो उसले बुझेनन् । तर खेल भगवान इन्द्रको थियो ।
राजा भंगस्वानाको विलाप
राजा भंगस्वानाले सोचे यो भगवान कै खेल हो । भने हे प्रभु । यो विपत्ति पछि म कसरी आफ्नो राज्यमा फर्कन सक्छु ? मेरो अग्नीष्टुता अनुष्ठानबाट १०० जना छोराहरू भइसकेका छन्, अब उनीहरूलाई कसरी भेट्ने, म के भनू ? मेरी रानी, ​​जो महारानी हुन् ? मेरो पर्खाइमा, म कसरी भेट्न सक्छु, मेरो मानिससँगै, मेरो राज्य सबै जान्छ, मेरो प्रजाको के हुनेछ ? यसरी शोक गर्दै राजा आफ्नो राज्यमा फर्के ।
भंगस्वानाको जंगल प्रस्थान
जब राजा नारीको रुपमा फर्किए, उनलाई देखेर सबै छक्क परे । राजाले बैठक बोलाएर रानी, ​​छोरा र मन्त्रीहरूलाई भने कि अब म राजदरबार सम्हाल्न योग्य छैन, तिमीहरू सबै यहाँ सुखी साथ बस्नु म वनमा गएर बाँकी जीवन बिताउनेछु।
राजा भंगस्वानाको नारी जीवन
यति भन्दै राजा जंगलतिर लागे । त्यहाँ गएपछि उनी नारीको रूपमा एक तपस्वीको आश्रममा बस्न थाले, जसबाट उनले धेरै छोराहरूलाई जन्म दिए। उनले ती छोराहरूलाई आफ्नो पुरानो राज्यमा लगेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भनिन्, म पुरुष हुँदा तिमी मेरो छोरा हौ, म नारी हुँदा यी मेरा छोराहरू हुन्। दाजुभाइले जस्तै मेरो राज्यको ख्याल गर। सबै दाजुभाइ सँगै बस्न थाले ।
सबैजना सुखी जीवन बिताइरहेको देखेर देवराज इन्द्र झनै क्रोधित भए र उनमा फेरि बदलाको भावना जाग्न थाल्यो । इन्द्रले सोच्न थाले कि राजालाई नारी बनाएर नराम्रो नभई राम्रो बनाएको छु जस्तो लाग्छ । यसो भन्दै इन्द्र ब्राह्मणको रूप धारण गरी राजा भंगस्वानाको राज्यमा पुगे । त्यहाँ गएर सबै राजकुमारहरुको कान भर्न थाले ।
इन्द्रको उक्साहटका कारण सबै दाजुभाइहरू आपसमा लडेर एकअर्काको ज्यान लिन थाले । भंगस्वानाले यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उनको मन दुख्यो। इन्द्र ब्राह्मण भएर राजाकहाँ आएर रोएको कारण सोधे । जब भंगस्वानाले रुँदै इन्द्रलाई सम्पूर्ण घटना सुनाए, इन्द्रले आफ्नो वास्तविक रूप देखाए र राजालाई आफ्नो गल्ती सुनाए।
इन्द्रले जीवन दान गरे
इन्द्रले भने, तिमीले मात्र अग्निको पूजा गर्यौ र मेरो अनादर गर्यौ, त्यसैले मैले तिमीसँग यो खेल खेलेको छु । यो सुनेर भंगस्वाना इन्द्रको पाउमा परे र नजानेको अपराधको लागि माफी मागे। राजाको यस्तो दयनीय अवस्था देखेर इन्द्रलाई दया लाग्यो । इन्द्रले राजालाई माफ गरे र छोराहरूलाई जीवित पार्न वरदान दिए।
Next ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछः डब्लूएचओ